Sony Xperia XA3 Plus qeexitaannada muhiimka ah ee ku daatay Geekbench | Androidsis
Sony waxay umuuqataa inay diyaarisay Xperia XA3 Plus, terminaal dhexdhexaad ah oo suuqa ku dhufan doona bedelka qofka Xperia XA2 Plus. Tan waxaa loo maleynayaa inay sabab u tahay muuqaalkeedii ugu dambeeyay ee Geekbench iyadoo loo marayo magaca 'H4493'.
In kasta oo cabbirka uusan si faahfaahsan u qeexin sida Xperia XA3 Plus, lambarka nambarka ee ka diiwaan gashan isla keydka xogta ayaa taxanaya taxanahan, sidaas, laga bilaabo maanta waxaan xaqiijin karnaa jiritaanka taleefankan casriga ah iyo imaatinkiisa aan fogayn ee suuqa.
Sida laga soo xigtay xogta ay bixisay Geekbench, moobiilka xiga ee taxanaha Xperia XA wuxuu la yimaadaa nidaamka hawlgalka ee Android 8.0 Oreo. Intaas waxaa sii dheer, liistadu waxay muujineysaa in terminaalku uu qalabeeyo Qualcomm Snapdragon 660 System-on-Chip, wax aan wax badan noo aheyn, sida aan fileynay inaan helno SD670 ama a SD710, adoo dalbanaya. Weli, kan dambe wuxuu u taagan yahay horumar aad u badan oo ku saabsan jajabkii loo adeegsaday ka horreeyay, oo ah SD630.
Cabirka wuxuu kaloo na siinayaa macluumaad muhiim ah: RAM. Marka tan la eego, qalabku wuxuu ku yimaadaa awood dhan 6GB -5.735MB, inuu sax noqdo. Isla mar ahaantaana, waxay faahfaahin ka bixinaysaa tirada xudunta iyo inta jeer ee processor-ka aan soo sheegnay, kaasoo ay ku diiwaangashan tahay illaa siddeed xawaare ugu sarreeya oo ah 2.21GHz.
Dhamaadka, dhammaantood waxay ku yimaadaan laba natiijo: 853 dhibcood oo ah qaybta hal-abuurka ah iyo 4.172 ee qaybta qaybo badan. Tani maahan wax la yaab leh, laakiin waxaa ugu wacan isku darka aan caadiga ahayn ee Snapdragon 660 oo leh 6GB oo RAM ah, taleefanka casriga ah ayaa ka sarreeya celcelis ahaan.
Ugu dambeyntii, waa in la ogaadaa taas Tilmaamahan Xperia XA3 Plus lama hubo, maxaa yeelay shirkaddu waa inay xaqiijisaa iyaga, si rasmi ah, markay si rasmi ah u shaaciso, wax aanan ka fogaan doonin inaan aragno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Sony Xperia XA3 Plus ayaa ka muuqda Geekbench: faahfaahinta muhiimka ah ayaa la muujiyay